06 May, 2021 - 13:05 2021-05-06T13:25:42+00:00 2021-05-06T13:25:42+00:00 0 Views
KWAYEDZA makadini? Ndiri musikana ane makore 26 ekuberekwa, ndinotsvaga mukomana ane makore 30 – 36 ekuberekwa asina chirwere. Nhare yangu 0714 814 797.
Makadini veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 23 ndotsvagawo musikana ave serious anoda zvemba ane makore 18 – 22. Ndobatika pa0773 656 355, ndatenda hangu.
Makadini? Ndiri murume anonamata ane makore 50, ndinotsvaga mukadzi ane makore 18 kusvika 50 ari muHarare. Ndiri HIV negative, andifarira ndibate pa0779 182 381.
Hello Kwayedza, ndiri murume ane makore 33 uye ndinotsvaga mudzimai ane makore 20 kusvikawo 30. Nhare yangu 0776 146 052.
Makasimba here? Ndiri mudzimai ane makore 37 nevana 3, ndiri pamushonga uye ndinodawo murume ari pamushonga. Anonamata, achitya Mwari anenge andifarira anondibata pa0715 155 278.
Ndinotsvagawo murume ane makore 40 zvichikwira, ini ndine 29. Handisi pamushonga, nhare yangu 0776 718 139. Zvakawanda totaura, ndiri muHarare.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 22, ndotsvakawo mukadzi wekuroora ane makore 18 kusvika 23. Andifarirawo ngaandibate pa0784 727 417.
Makadii henyu veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 29. Ndinodawo shamwarisikana ine makore 24 – 29. Andida ngaandibate pa0718 096 408.
Makadiiko veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 42. Ndinotsvagawo murume ari pachokwadi nekuvaka musha naye, matsotsi ndaramba. Nhare yangu 0784 555 167.
Makadii? Ndiri murume ane makore 41 nevana 2, handina chirwere uye ndakasununguka kutorwa ropa. Ndoda mukadzi akavimbika anoenda kuchechi, nhamba dzangu 0715 784 779.
Kwayedza makadii? Ndiri mukomana ane makore 27, ndoshandira muHarare uye ndotsvaga musikana ane makore 18 kusvika 23. Asina chirwere ndobatika pa0782 309 274.
Makadii Kwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 27. Ndinotsvagawo mukadzi anoda zvemba kubva pamakore 18 kusvika 24. Nhare yangu 0779 413 356.
Makadii pano paTishamwaridzane? Ndinotsvakawo shamwarisikana yekufambidzana nayo. Ndine makore 30, ndodawo ane makore 20 – 25 kana ane mwana. Ndine mwana 1, ngaavewo anonamata anotya Mwari. Nhare yangu 0778 628 478.
Makadini? Ndiri murume ane makore 40 nevana vaviri, ndiri positive uye ndotsvagawo mudzimai ane makore 35. Andifarira ngaandibate pa0778 037 634.
Vechirongwa, ndiri murume ane makore 40. Ndinodawo musikana ari kutsvagawo murume tiwirirane. Runhare 0719 287 106.
Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 22 wekuroora. Nhamba dzangu 0776 685 097.
Ndinonzi Tamurudzwa murume ane makore 35, ndiri vhenda uye kumusha kuMasvingo. Ndiri wekwaDuve, ndodawo mudzimai anonamata ane makore 28 zvichidzika. Nhare yangu 0716 137 954.
Makadii? Ndine makore 42, HIV+ uye handina mwana. Ndoda mukadzi anorevesa. Nhare yangu 0775 316 821.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 30 ndotsvakawo mukadzi wekuroora chero ari kuda zvemba. Zvakawanda totaura, afarira ndibate pa0774 056 962.
Makadii vedare? Ndiri murume ane makore 32 ekuberekwa nemwana 1. Ndotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 20 kusvika 25. Ari serious ngaandibate pa0716 368 164, kufona kana text.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 33, ndinotsvaga mudzimai wekuroora asina chirwere ane makore 18 kusvika 29. Ngaave ane mwana 1 kana vana 2. Andifarira ngandibate pa0715 327 298.
Ndiri kutsvaga mukadzi wekuroora ane makore 30 kusvika 36 asiri pamushonga. Ndine makore 40 ane mwana mumwe anoziva Mwari. Anondida anondibata pa0785 538 637.
Ndanzwa nekunyorera. Ndiri murume ane makore 44, HIV+ uye ndinoda mukadzi anoda zvemba ane makore 35 – 44. Handishandi, ndinoda akafirwa nekuti ini ndakafirwa. Vana ndine 3, ane vana 3 kana 2 anonamata andida ngaandibate pa0718 918 303.
Makadini? Ndinotenda ndakamuwana, vaifona panhamba idzi 0778 034 546 chiregerai.
Makadini? Ndiri murume ane makore 42. Ndinotsvagawo mudzimai ane rudo wekugara naye ane makore 40 – 50. Ari pamushonga anoda anondibata pa0775 617 947.
Makadi veKwayedza? Ndiri mukadzi ane vana 2, ndine makore 21 uye ndiri kutsvagawo murume ane Makore 24 – 32. Ari pachokwadi asiri pamushonga ngaandibate pa0772 693 222.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvakawo mudzimai anoda zvemusha wekuroora ane makore 30 zvichidzika, mutsvuku uye mukobvu. Nhare yangu 0788 012 926.
Makadini veTishamwiridzane? Ndiri musikana ane makore 18, ndotsvakawo mukomana wekushamwaridzana naye ane makore 19 – 25. Ngaave pachokwadi, nhare yangu 0788 693 636.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 37 nemwana 1, HIV negative. Ndinotsvaga murume ane makore 40 – 50 asi varume vevanhu kwete. Nhamba dzangu 0778 662 328.
Makadini veKwayedza nevatsigiri vose? Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1, ndinotsvagawo mukadzi ane mwana wake. Ane makore 26 zvichidzika, zvakawanda totaura panhamba inoti 0717 995 911.
Hie, ndiri kudawo mukadzi wekugara naye ari pachokwadi. Ngaave ane mwana wake, zvakawanda totaura pa0774 792 487.
Ndiri murume ane makore 38, ndinotsvagawo mukadzi ane rudo, mukobvu asina chirwere ane chero api makore. Handishande pari zvino, andifarira ndibate pa0773 278 946.
Makadii Kwayedza? Ndiri murume ane makore 28, ndogara muHarare uye ndotsvagawo mukadzi ane makore 20 – 24 ari serious nemba. Ndobatika pa0712 528 982.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 36, ndinotsvagawo musikana wekuwadzana naye ane rudo asiri pamushonga. Ndobatika pa0787 440 891.
Makadii? Ndotsvagawo murume asina mukadzi, ndine vana 2 asi varume vevanhu kwete. Ndine makore 27, nhare yangu 0712 672 122.
Ndiri mukadzi ane makore 38. Ndotsvagawo murume wekufambidzana naye ane makore 50 zvichikwira. Nhare yangu 0783 392 263.
Makadii? Ndiri murume ane makore 49, ndotsvakawo mukadzi ane makore 30 – 40 ari negative seni. Ndinobatika pa0774 443 695.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 40, ndoda mudzimai ane makore 18 kusvika 30 asina kunyanyosimba uye asina chirwere. Ndine mwana 1, nhamba dzangu 0783 050 537.
Ndiri musikana ane makore 22, ndinotsvagawo mukomana akavimbika, anotya Mwari uye anoenda kuchechi. Ngaave anoda zvekuvaka musha, kumusha ndekwaMutare. Andidawo ngaandibate pa0788 492 621.
Ndiri murume ane makore 49. Ndodawo mukadzi akanaka mukobvu nemagadziko mahombe asi mazamu madiki. Ngaave nemakore 33 – 43 nevana 3. Andida fona pa0785 441 548.
Makadiii? Ndinoda kutenda nerubatsiro, ndakamuwana wandaida, chimirai kufona pa0779 594 984.
Makadii hama dzadiwa? Ndiri murume ane makore 38 nevana vaviri, ndinotsvagawo mukadzi wekuvaka naye musha ane vana vakewo seni. Ngaave ane makore 30 kusvika 33. Andifarira ndinobatika pa0773 847 265, ndatenga hangu.
Ndiri murume ane makore 45 asina chirwere. Ndinotsvaga mukadzi wekufambidzana naye asina chirwere ane makore 18 kusvika 30. Ndobatika pa0773 939 035 sms, necall back ndopindura.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 32, ndinotsvaka mukadzi wekuroora ari pachokwadi ane makore 25 kusvika 28. Ndinoshanda kumaMazowe, nhare yangu 0786 800 051.
Ndakazowana murume anondida, pliz vari kuramba vachifona pa0771 955 183 chiregai henyu.
Ndiri murume ane makore 30, ndinotsvaga mudzimai ari pachokwadi ane makore 23 kusvika 26. Ndine mwana 1, andida ngandiabate pa0719 891 645.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28, ndotsvakawo musikana ane makore 20 kusvika 29 anoda kuvaka musha. Ngaandibate pa0778 886 512.
Ndiri murume ane makore 40, ndinotsvagawo musikana anoda zveimba asi ari munhu akavimbika. Andibate pa0786 148 121.
Ndiri murume ane makore 50, ndinotsvagawo mudzimai ane makore 40 zvichidzika asiri pamushonga. Anopinda Roman Catholic, ngaandibate pa0712 271 124.
Ndiri murume ane makore 40. Ndinotsvaga musikana angandidewo pachokwadi. Anoda anondibata pa0774 296 731.
Ndiri mudzimai ane makore 27 nevana 2, ndinotsvakawo murume wekuwadzana naye. Ndinobatika pa0776 619 472.
Murume ane makore 54, HIV positive anotsvaga mukadzi anogara kumusha. Vasiri vekumusha ndapota kwete. Nhare yangu 0771 465 924.
Makadiiko? Ndiri kutsvakawo mukadzi ane mwana 1 kana asina ane makore 22 kusvika 29. Ngaave asiri pamushonga wekuMidlands. Nhare yangu 0774 484 358.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 37, ndinotsvaga mukadzi ave kuda zvekuroorwa. Ngaave akasimba kana mutete ane makore 25 – 40. Nhamba dzangu dzinoti 0782 493 670.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 37, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 39. Vandifarira vanotumira meseji pa0718 598 576.
Ndiri mudzimai ane makore 30 nevana 2, ndinotsvakawo murume ari pachokwadi anoda zvekuroora. Ndinobatika pa0788 349 471.